Waxaad mar walba ku qori karta oo qoraysa daqiiqado qaali ah nolosha ee la fiidiyo Sony ah. Laakiin aad rabto inuu u ciyaaro aad video on Mac, XP, ama computer Vista; waxaad u baahan doontaa dhibaato ah u ciyaaro? Waxaad u leeyihiin in ay ogaadaan in files AVCHD uusan ciyaarin in qaar ka mid ah nidaamyada hawlgalka, ka duwan Mac macruufka X iyo Windows 7 iyo OS ka dib in si dabiici ah u ciyaara file qaab this, kuwa waaweyn qaarkood aysan heli karin.
Si aad xal arrintan, aad leedahay si ay wax ugu horeysay og. Inta badan kaamirada Sony yihiin dad lagu daydo HD. Inta badan kaamirada Sony soo saaro AVCHD ama MPEG-2 video qaabab. Laakiin file kordhin sida caadiga ah waxaa laga yaabaa in MTS. Sidaa darteed, diinta aad Sony videos in qaabab kale in la taageero karaan your computer noqon lahaa ikhtiyaarka ugu fiican.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa software xoogan oo si gaar ah sameeyey si ay u xaliyaan dhibaatooyinka noocan ah. Wondershare Video Converter Ultimate Waxay kaa caawin kartaa in diinta asalka Sony videos, ma ahan oo keliya MPEG laakiin sidoo kale MTS iyo MTS2 qaabab file video inuu ka soo leexdo galay oo kale qaabab video sida MP4, Mpg, wmv, MOV, MKV, iyo wax badan oo dheeraad ah.
Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate utility awood badan badan loo, waxa kale oo aad awoodi kartaa in aad xaalkaa Sony soo saaray videos ay feature tafatirka aasaasiga ah; waxaad noola karo iyo jar ka video ee deegaanka, waxa ay qarka u saaran inay la barbardhigo habboon, dhalaalka, iyo saturation, oo wuxuu ku shubay watermark iyo subtitles ku yaal.
Qeybta 1: 5 Sony Camera
Qeybta 2: Sida loo Play Sony AVCHD Files
Qeybta 3: Sida loo Beddelaan Sony AVCHD
Qeybta 1: 5 camera Sony
AVCHD qaab ah in la soo saaro by Sony iyo Panasonic ayaa xaqiiqo ah suuqa u qaaday, duufaanka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in sida ugu wanaagsan si loo hubiyo in qaab AVCHD la riyaaqay waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in kaamirada Sony aan la sahmin oo kaliya laakiin user sidoo kale helo aragti ah marka ay timaado in this topic iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in sida ugu wanaagsan si loo hubiyo in kaamirada Sony ka yihiin sahamiyey waxa lagula talinayaa in ay dhex maraan ee lagu daydo in ay leeyihiin Waxaa halkan ku xusan si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka ugu badan ee mashiinka tahay in la soo saaro shirkadda. Qiimaha uu soo qoran Amazon waa $ 1598 taas oo mid ka mid ah cams ugu raaxo ah mar walba ka dhigaa. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in haddii ugu wanaagsan waa in la riyaaqay markaas Cam ah waa in la sameeyaa qayb muhiim ah oo boorsooyinka ka. Ma aad heli doontid darbooyinka AVCHD ugu fiican laakiin tijaabin doonaa dhererka waqtiga in tani ay hal mar maalgashiga qiimihiisu waa:
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo ku dayasho ugu horumarsan in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo functionalities ugu guurto waqti lahayn gudaha iyo sidoo kale ay ka helaan heshiisyo ugu fiican dhigi lahaa. Qiimaha ku qoran ee alaabta marka ay timaado Amazon waa $ 1098 oo mar kale mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican ee mar walba ka dhigaa. Waxay ka dhigaysa hubiyo in user ma aha oo kaliya helo adeegyada ugu fiican lakiin marka ay timaado sheegtay in ay damaanad iyo xallinta arrimaha kale ee markaas arrinta ma adag tahay oo dhan, sida taageerada macaamiisha Sony E waa sidoo kale waxaa si ay u caawiyaan macaamiisha:
3. Sony HDR-PJ790V High Qeexid fiidiyo Cam Handy
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in arrinta aan lagu xalin kaliya ee ku caashaqi jiray qaab AVCHD laakiin kala iibsiga ee sawirrada si madal kale sida daaqadaha iyo Mac ma aha arin oo dhan. Qiimaha mar kale waxa ku qoran Amazon waxaa mid ka mid ah cams xilliyada ugu wanaagsan oo aan kaliya aad u badan oo kharash badan, laakiin waxay bixiyaan natiijada ugu fiican oo dhan ka dhigaysa. Qiimaha waa $ 1199 taasoo ugu fiican marka ay timaado dadka jecel in ay helaan adeegyada ugu fiican waqti lahayn gudaha iyo sidoo kale in la hubiyo in user helo jawaabta laga cabsado marka ay yimaadaan si ay shirkada iyo waxyaabaha la xiriira ee ku sifayn la mid ah oo waa dhan ay sabab u tahay tayada:
4. Sony HD Video Rikoodh HDRPJ670 PJ Handy Cam fiidiyo
Iyadoo fiidiyo ah oo aan tayo aad u sarreeya marka la barbar dhigo kuwa la soo hor taxay laakiin weli aragnimo user la wanaajiyey si kasta oo macquul. Kororka ku caan ah wax soo saarka taasi waa uun sabab u ahaa xaqiiqada ah in user ma noqon doonto mid ay awoodaan oo keliya in ay helaan adeegyada ugu fiican ee kharash yar laakiin adeegyada macaamiisha ah ayaa sidoo kale gobolka of farshaxanka si loo hubiyo in user helo ugu fiican gudahood lahayn Waqtiga. Taageerada online sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo adeegyada ugu fiican oo arrinta la xalin markii jirin oo dhan kaas oo sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si aad u hesho Cam ka qiimo yar ka dibna wuxuu ku raaxaysan adeegyada taas oo Sony Inc. ee lagu yaqaan gudahood. Qiimaha Cam ay tahay oo keliya $ 648,
5. Sony HD Video Rikoodh HDRPJ440 PJ Handy Cam fiidiyo
Waxaa mar kale waa mid ka mid ah kaamirada ugu fiican oo loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeeg tahay ee la xiriirta duubo AVCHD waxaa la siiyaa si ay macaamiisha ugu. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya ay heli doonaan taageero online laakiin magaca Sony laftiisa waa ku filan si loo hubiyo in user helo heshiis fiican ee wax waqti ah gudahood oo dhan. Qiimaha Cam waa mid aad u yar yar iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in Amazon ayaa waxaa ku qoran $ 298 oo kaliya.
Qeybta 2: Sida loo Play Sony AVCHD Faylal ay la Wondershare Player
Wondershare Player waa ciyaaryahan AVCHD ah in aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah. Waa a AVCHD video ciyaaryahan madal-madax-bannaan weyn. Mid ka mid ah sababaha Wondershare Player waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican AVCHD maanta waa in, waxa ay leedahay design oo isku dhafan si ka dhigaysa mid aan ku adag tahay in ay ku riday modules qaab video cusub. Si aad u ciyaaro iyo daawan file kasta oo AVCHD ka fiidiyo Sony, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 Download Wondershare Player
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Player lacag la'aan ah ka link this. Waxaa sidoo kale laga heli karaa labada Windows PC iyo Mac PC. Degsado iyo ku rakibidda ee Wondershare Player in nidaamka computer weligiis ma qaadan lahaa dhammayn. In arrin daqiiqado yar ka dib markii duuban, waxa ay diyaar u yihiin isticmaalka noqon.
Tallaabada 2 Daahfurka Wondershare Player iyo Import faylasha
Markii geeddi-dajinta iyo rakibidda Wondershare Player la sameeyo, abuurtaan barnaamijka iyo dajiyaan file AVCHD aad rabto in aad ka ciyaari. Waxaa jira laba hab oo taas loo sameeyo. Mid ka mid First waa in gacanta ay dajiyaan by riixaya badhanka File Open helay xarunta guddiga barnaamijka. Habka labaad waa si fudud waxayna jiidayeen file AVCHD aad rabto in aad ka ciyaari folder il ay ka tagtey oo guddiga barnaamijka.
File video waa bilaabi isla ciyaaro. Haddii file video uusan bilaaban ciyaaryahan ka dib markii aan sidaa yeelno, file waxaa aad isku dayaya inuu u ciyaaro laga yaabo in la khilaafo ama laga yaabo in qalad ah.
Qeybta 3: Sida loo Beddelaan Sony AVCHD Faylal ay la Wondershare Video Converter Ultimate
Haddii aad keligaa ciyaaro aad video la Wondershare Player kuma filna idiin sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad kulamo aad video in qalab kale sida telefoonka gacanta, kumbiyuutarada miiska, iyo kuwa kale, wax ugu fiican ee aad awoodo inaad ka fiirsan waa diinta aad file video AVCHD qaab ah waa playable in qalabka ugu, aad u badalo karaa MOV ama MP4 files. Labadan files hubkaas ayaa loo isticmaalaa by dad badan oo raba inay video files ay playable galay nooc kasta oo ka mid ah qalabka ama nidaamyada hawlgalka.
Mid ka mid ah ugu wanaagsan video converters mid u isticmaali karaan maanta waa Wondershare Video Converter Ultimate . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loogu badalo qaab faylka gaarka ah video in si kale oo ku dhawaad ​​40 qaabab file video kala duwan. Si aad u ogaato sida loo kala soo bixi badeecadan la yaab leh, raac talaabada hagitaan talaabo talaabo hoos ku qoran.
Tallaabada 1 Download iyo Daahfurka Wondershare Video Converter Ultimate
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate u PC iyo Mac kombiyuutarada labadaba. Ka dib markii ay soo degsado file ah, waxaa loo soo dajiyo si aad u computer ka dibna abuurtaan.
Tallaabada 2 Import AVCHD File
Sida ciyaaro file ah oo ku saabsan Wondershare Player, waxaa kale oo jira laba hab oo u fudud in ay dajiyaan file ah oo aad rabto in aad si loogu badalo la Wondershare Video Converter Ultimate. Habka koowaad waa adigoo gujinaya button Add File ku taalla badhtamaha guddiga barnaamijka oo markaas loo helo iyo xulashada faylka aad rabto in aad si loogu badalo. Habka ugu fudud ee soo socota waa ay si fudud file ama faylasha jiidayeen ka folder il iyo tagtey faylka guddiga barnaamijka.
Tallaabada 3 Dooro Qaabka Output ah
Sidii hore loo sheegay, Wondershare Video Converter Ultimate kuu ogolaanaya in aad noqon file AVCHD aad galay mid ka mid ah 40 file kala duwan video barnaamijka bixisaa. Soo saarka ayaa files ugu haboon in aad isticmaali karto si ay u shaqeeyaan qalabka kale ee mobile waa MOV iyo MP4. Dooro wax u dhexeeya laba ka dhanka midig ee suuqa kala barnaamijka.
Tallaabada 4 Beddelaan File
Markii wax walba waa diyaar, guji badhanka Converter ku yaalaa koonaha midig ee suuqa kala barnaamijka ka. Wareejinta waxaa isla markiiba bilaabi doonaan. Waxaad ku xasil karo ama rido qaab beddelidda mar kasta oo aad ka raalli tahay.
Dhibaatooyinka Dhignaashada Xalinta u iPad
Sida loo rogo ama MTS in MKV
YouTube in MP3 converters The Best talinayo
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play iyo Beddelaan Sony AVCHD Files